Laanta Socdaalka oo ka guurtay Solna | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa ka guurtay xarunteedii caanka ahayd ee xaafada Solna, Stockholm ayadoo u guurtay Hallonbergen. Wixii la xiriira soo galootiga sida codsiga magangalyada, haddii aad wax ka ogaanaysid kiiskaaga iyo goobaha waraysiga ayaa loo wareejiyay xarunta cusub. Dadka degenaanshaha haysta, codsiga baasaboorka iyo cusbooneysiinta ayay aadayaan goobtii hore ee ku taala Solna. "Aad ayaan ugu faraxsanahay xarunta cusub iyo naqshada loo sameeyay" ayuu yiri agaasimaha guud ee Laanta Socdaalka Dan Eliasson Xarunta cusub ayaa aad uga qurxoon goobtii hore ayadoo aad loo naqshadeeyay oo leh sidoo kale goob qaas ah oo loogu talagalay qoysaska iyo caruuta. Halkaan ayaad ka heli kartaa addresska iyo goobta ay ku taal xarunta cusub
Laanta Socdaalka oo ka guurtay Solna
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa ka guurtay xarunteedii caanka ahayd ee xaafada Solna, Stockholm ayadoo u guurtay Hallonbergen. Wixii la xiriira soo galootiga sida codsiga magangalyada, haddii aad wax ka ogaanaysid kiiskaaga iyo goobaha waraysiga ayaa loo wareejiyay xarunta cusub.
Dadka degenaanshaha haysta, codsiga baasaboorka iyo cusbooneysiinta ayay aadayaan goobtii hore ee ku taala Solna.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay xarunta cusub iyo naqshada loo sameeyay” ayuu yiri agaasimaha guud ee Laanta Socdaalka Dan Eliasson
Xarunta cusub ayaa aad uga qurxoon goobtii hore ayadoo aad loo naqshadeeyay oo leh sidoo kale goob qaas ah oo loogu talagalay qoysaska iyo caruuta.
Halkaan ayaad ka heli kartaa addresska iyo goobta ay ku taal xarunta cusub
Cabashooyinka magangalyo doonka oo sii kordhaya